लकडाउनपछि बदलिएला चलचित्रको कथा भन्ने शैली ? - Entertainment Khabar
लकडाउनपछि बदलिएला चलचित्रको कथा भन्ने शैली ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १४, २०७७ समय: ६:१४:३८
३ महिना लामो लकडाउनको समयमा नेपाली दर्शकले विश्वभरका चलचित्रको स्वाद लिने मौका पाए । विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्ममा दर्शकले विश्वभर बनिरहेका नयाँ नयाँ शैलीका चलचित्रमा आफूलाई भिजाए । यसैले, पनि अब दर्शकको चलचित्रप्रतिको स्वाद बदलिएको छ भन्ने टिप्पणी चलचित्र बजारमा हुन थालेको छ ।
नेपाली चलचित्रका मेकरहरु पनि अब दर्शकलाई पुरानै शैलीका कथा पस्किएर सफलता पाउन नसक्नेमा सजग छन् । यसैले, लकडाउनको समयमा उनीहरुले कथामा नयाँ बिषय खोज्ने प्रयास गरे ।
‘छक्का पन्जा ४’कै कथामा व्यस्त दीपक
निर्माता तथा लेखक दीपकराज गिरीले लकडाउनको समयमा चलचित्र ‘छक्का पन्जा ४’को कथा लेखनमै आफूलाई व्यस्त बनाए । दीपक भन्छन्–‘छक्का पन्जा ४ को कथा अगाडिको भन्दा फरक छ । यसको छायांकनका लागि पनि एक बर्ष लाग्छ । करिब ३ करोडको बजेटमा यो चलचित्र बन्नेछ ।’
दीपकका अनुसार, उनले लकडाउनको समयमा २ वटा बाहिरी ब्यानरका चलचित्रका कथा पनि सुनेका छन् । उनका अनुसार, ‘छक्का पन्जा ४’ अगाडि उनी बाहिरी ब्यानरको चलचित्रमा काम गर्नेछन् ।
कथामा नयाँपन खोज्नुभयो त भन्नु प्रश्नमा दीपकले भने–‘लकडाउन नभएको भएपनि हामीले अब चलचित्रमा नयाँ बिषय भन्नुपर्ने थियो । हामीले लामो समय एउटै शैलीका कथा भनेका छौं । अब, दर्शकलाई झुक्याएर राख्न मिल्दैन । यसैले, आफ्नोपन बोक्ने कथा भन्न आवश्यक छ ।’
नयाँ कथा भन्न जहिले सजग छुः प्रदिप भट्टराई
चलचित्र ‘जात्रा, शत्रु गते र जात्रै जात्रा’का निर्देशक प्रदिप भट्टराइले लकडाउनको समयमा चलचित्र लेखनका लागि खासै समय छुट्याएनन् । लकडाउन अगाडि नै उनले मह जोडीको साथमा काम गर्न लागेको चलचित्रको कथा फाइनल गरेका थिए । लकडाउनको केही समय उनले यही कथालाई अझै धेरै पटक पढे । प्रदिप भन्छन्–‘हाम्रो टिमले चलचित्रको कथामा नयाँपन भन्नका लागि सधै प्रयास गरेको छ । अब, दर्शकको स्वाद फेरिएकाले हामीसँग ठूलो चुनौती थपिएको छ । यसैले, यो कुरामा म सजग छु ।’
प्रदिपले मह जोडीसँग काम गर्ने चलचित्रको छायांकन फागुणबाट सुरु गर्न सकिने बताए । तर, यो बिचमा एउटा कथा लेख्ने र २ वटा चलचित्र एकसाथ निर्देशन गर्ने उनको तयारी छ ।
स्क्रिप्ट अनुसार फिल्म नै बन्दैनः प्रदिप भारद्धाज
चलचित्र लेखक प्रदिप भारद्धाजले लकडाउनको समयमा ४ वटा प्रोजेक्टको काम सके । उनले चलचित्र ‘पारस’को कथा लेखेर सकेको बताए । साथै, चलचित्र ‘झ्यानकुटी २’को स्क्रिप्ट पनि लेखेको उनले सुनाए । साथै, एउटा लभ स्टोरी चलचित्र र ‘आधा खुशी’ नामक सिरियलको ५० एपिसोड लेखेर सकेको प्रदिपले बताए ।
भारद्धाज भन्छन्–‘मैले डिजिटल प्लेटफर्म आउनु अगाडि नै कथा भन्ने शैली परिवर्तन गर्छु भन्दै आएको हुँ । तर, यहाँ लेखेको कथामा चलचित्र नै बन्दैन । कुनै निर्देशकले मैले लेखेको कथालाई ५० प्रतिशत मात्र पर्दामा उतार्नुभयो भने मलाई खुशी लाग्छ । यसैले यस्तो बहस गर्नु बेकार छ ।’
सरकारले छायांकनका लागि अनुमती दिएसँगै दर्जन बढी चलचित्रका निर्माताले छायांकन सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, दर्शकले चलचित्रको स्वादमा नयाँपन खोज्न थालेकाले मेकरले पनि अब पुरानै शैली अपनाएर भने हुँदैन । यी कुरामा ध्यान नदिने हो भने, नेपाली चलचित्रले फड्को मार्ने अपेक्षा बेकार हुनेछ ।
टिभीमा पत्रकारिता गर्न गएको, जिएम साब त ‘जसरी हुन्छ ठोक्नुस्’ आदेश पो दिन्छन्
“कर्मचारीको पिसिआर टेस्ट गरेको खबर बाहिर गयो भने राम्रो सन्देश जाँदैन। टेलिभिजन नै सिल हुनसक्छ। के गर्ने भनेर व्यवस्थापन...
काठमाडौँ। कोरोनाका कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्र चार महिनादेखि ठप्प छ । चलचित्र क्षेत्र ठप्प रहेपनि म्युजिक भिडियोको छायाँ...
जीवन र आर्यनको पर्दा भित्र प्रतिस्पर्धा, पर्दा बाहिर मित्रता
नायक आर्यन सिग्देलले आज आफ्नो जन्मदिन मनाइहेका छन् । जन्मदिन मनाउन आर्यन पोखरा पुगेका छन् । हुनत, आर्यनलाई जन्मदिनको शुभ...
हिरो भर्सेज हिरोइन
काठमाडौं। ‘गल्ती गरेको छ भने बुबा भएपनि सजाय पाउनुपर्छ।’ यो तपाईं-हाम्रो बोलीचालीमा प्रयोग गरिने शब्द हो। तर, व्यवहारमा ...
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – मन मिल्ने साथी भेटिए पनि मनको भाव व्यक्त गर्न उपयुक्त साइत पर्खनुहोला । पछिका ...